यस प्रक्रिया र सिफारिसहरू एक विवरण: बचत बैंक मा ऋण कसरी प्रिपे गर्न
हरेक संगठन, को ऋणदाता रूपमा अभिनय एक ऋण पूर्वभुक्तान प्रदान गर्दछ। बचत बैंक ग्राहकहरु थप भाग्यवान् थिए: यो, यदि चाहेको, ऋण वा भाग पूरा रकम तत्संबंधी चुक्ता गर्न अनुमति दिन्छ। उधारकर्ता गर्न लेनदेन लागि सेवा कार्यालय भ्रमण र एक विशेषज्ञ उधारो जनसंख्या हेर्न आवश्यक हुनेछ। को जमानत सम्झौता भर्नु पछि बर्खास्त वा यसको घटक (भुक्तानी तालिका) मा परिवर्तन गरिएको छ। गणना मा कठिनाइ जोगिन गर्न, तपाईं कसरी Sberbank देखि ऋण प्रिपे गर्न जान्नुपर्छ।
एक ऋण सम्झौता मा हेर्न
ऋण को प्रारम्भिक परिशोधन गर्न कार्य निर्णय यसको डिजाइन मा बनेको बैंक, सामना गर्न मद्दत गर्नेछ। वार्षिकको वा भिन्नता: करार मासिक भुक्तानी गणना गर्दा प्रयोग गर्न विधि निर्दिष्ट हुनेछ। पहिलो विधि को आदर आवश्यक बराबर योगदान द्वारा विशेषता छ ऋण। वार्षिकी - मासिक समतल शुल्क, ऋण तिर्न आवश्यक यदि यो पहिचान गर्न सजिलो र स्वतन्त्र छ।
भिन्नता भुक्तानी impermanent छन्। तिनीहरूले परिवर्तन हरेक महिना बिस्तारै घट्दै। उदाहरणका लागि, ऋण अवधि को सुरुमा ग्राहक बैंक 600 rubles दिन्छिन्, र अन्त मा - पहिले नै 400. अनि चासो बिस्तारै अस्वीकार, तर प्रमुख ऋण को राशि बराबर installments बन्द लेखिएको छ।
अंतर र वार्षिकी भुक्तानी बारेमा
बचत बैंक मा तालिका को ऋण अगाडि कसरी चुक्ता गर्न बुझ्न, तपाईं मासिक योगदान को गठन को सार बुझ्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, फिर्ता उधारो पैसा बैंक वार्षिकी विधिमा, ग्राहक निम्न अवस्था सदस्यता:
प्रत्येक महिना सम्पूर्ण ऋण अवधि त्यहि रकम तिर्न पर्छ;
भुक्तानी प्रमुख र ऋण को सम्पूर्ण रकम मा गणना मासिक आधार मा ब्याज को एक भाग हुन्छन्;
तिनीहरूलाई को भन्दा करार अवधि को पहिलो आधा सशुल्क छन्।
फलस्वरूप, ऋणबाट को मात्रा मात्र अन्तिम भुक्तानी मा उपकारको साटो तिरे छ। तसर्थ, क्रेडिट को पहिलो आधा मा थप अनुकूल छ "बुझाने" गर्न , करार अवधि बैंक अझै चासो ठूलो भाग ग्राहक प्राप्त गरेको छैन जब।
ऋण मासिक बकाया को परिशोधन को भिन्नता विधि रकममा फरक हुन्छन्। आफ्नो प्रमुख मूल्य एक बिलिङ अवधि र चासो गर्न attributable छ। हाल यो बेला बाँकी, ऋण को पूर्ण रकम लागि चार्ज। यो परिशोधन विधि उधारकर्ता थप अनुकूल हो - overpayment एक धेरै कम छ।
बचत बैंक मा ऋण प्रिपे कसरी गर्न सक्छ? त्यहाँ गणना पूरा गर्न पालन गर्न भनेर आवश्यकताहरु को एक नम्बर हो। बैंक न्यूनतम भुक्तानीको लागि आवश्यकताहरु आयातित छैन दुवै आंशिक र पूर्ण परिशोधन preclude छैन। साथै, उधारकर्ता प्रारम्भिक भुक्तानीको लागि एक दण्ड तिर्न छैन।
को मामला मा अनिवार्य ग्राहक कार्य ऋण "बन्द" वा निर्धारण केही मात्रामा निम्न जानकारी निर्दिष्ट हुनु पर्छ जसमा बैंक, एउटा लिखित बयान प्रदान गर्न छ बनाउन:
परिपक्वता मिति (काम गर्ने दिन);
योगदान को राशि;
खाता कोष हस्तान्तरण गरिने बाट।
बचत जानकारी हुनुपर्छ समय निर्धारित सहनुपरेको अघि 30 दिन।
जब ऋण ग्राहक को प्रारम्भिक परिशोधन प्रयोग को अवधि समावेश हुनेछैन भन्ने अवधि लागि बीमा को भाग वापस माग्नु अधिकार छ। इच्छित यदि निस्सन्देह, यो प्रक्रिया ऋण को परिशोधन भन्दा बढी लामो, तर सम्भाव्य छ। आवेदन, तपाईं बैंक अनुरोध गर्न सक्छ, जो को आकार पनि प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
बचत बैंक मा ऋण कसरी प्रिपे आश्चर्य छैन, तपाईंले भनेर यो गर्न हुनेछ जान्नु आवश्यक छ। धन र निर्धारण (बन्द) निम्न बुँदाहरूमा कम ऋण रकम को को सफल स्थानान्तरण लागि सामान्य नियम:
प्रारम्भिक परिशोधन मा एक बयान लेख्न र 30 दिन धन को निर्धारित भुक्तानी गर्न पूर्व भित्र बैंक ले;
यसलाई हेर्न कर्मचारी छलफलको लागि स्वीकृति को एक बयान मा छाप राख्न भनेर;
कुनै पनि सुविधाजनक तरिका मा निर्धारित रकम भुक्तानी;
ब्यालेन्स मा परिवर्तन;
ऋण को पूर्ण परिशोधन पुष्टि, वा कागजातहरू (आंशिक छुटकारा को मामला मा) एक नयाँ भुक्तानी तालिका अनुरोध।
यो मासिक भुक्तानी को योजना शायद परिवर्तन उल्लेख गर्नुपर्छ, टी। गर्न। Sberbank अक्सर वार्षिकी भुक्तानी संग ऋण ड्र। ऋण सम्झौताको आफ्नो परिवर्तन जीवनको आंशिक परिशोधन, जबकि योगदान को मात्रा नै रहन्छ जब।
अर्को भुक्तानी गर्न, वा ऋण को प्रारम्भिक परिशोधन लागि रकम फरक हुन सक्छ। बैंक दाबी उठाउनु छैन भुक्तानीको एक विधि, ग्राहक आफ्नै प्राथमिकता र सुविधा द्वारा निर्देशित छ। तपाईं टर्मिनल (पनि तेस्रो-पक्ष संगठन), ई-पर्स, बैंक स्थानान्तरण वा नगद जम्मा प्रति अधिक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, क्रेडिट स्कोर मा आफ्नो पैसा राखे।
सेवा प्रयोगकर्ता "Sberbank अनलाइन" अपरेसन पनि सजिलो बनाउन। यो नेटवर्क र कार्ड वा बैंक अर्को खातामा रकम को आवश्यक रकम पहुँच पर्याप्त छ। कसरी अनलाइन सेवा को मद्दतले बचत बैंक मा ऋण प्रिपे गर्न? यसो गर्न, तपाईं कार्यहरू एक नम्बर बनाउन आवश्यक:
"Sberbank अनलाइन" सिस्टम लग इन गर्नुहोस्।
को "क्रेडिट" खण्डमा जानुहोस्।
आफ्नो सक्रिय ऋण क्लिक प्रारम्भिक परिशोधन (आंशिक, पूर्ण) को बाटो चयन गर्नुहोस्।
राशि, खर्च र चार्ज को अवधि निर्दिष्ट, बाहिर फारम भर्न।
को "बनाउन अनुरोध" मा क्लिक गर्नुहोस्।
प्रविष्ट गरिएको डाटा को विशुद्धता जाँच र एसएमएस-कोड को मद्दतले कार्य पुष्टि गर्नुहोस्।
कार्यान्वयन आवेदन अनलाइन खाता मार्फत अनुगमन गर्न सकिन्छ।
पूर्ण प्रारम्भिक परिशोधन
त्यहाँ पहिले योजना भन्दा ऋण को आवश्यक रकम भने, उधारकर्ताओं अक्सर आफ्नो ऋण को पूर्ण मिल्दाजुल्दा सोच्न। मौद्रिक दायित्व पनि सबैभन्दा समृद्ध मान्छे बोझ। तिनीहरूलाई छुटकारा प्राप्त पनि छैन मात्र सुखद, तर लाभदायक छ। बन्द prematurely ऋण को राशि काटन पछि गलत हातमा अतिरिक्त पैसा तिर्न छैन। तपाईं मात्र बजेट बाट मासिक deductions बारेमा भूल, तर पनि सम्झौता को कालो रहन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले केही सरल नियमहरू थाहा हुनुपर्छ।
कसरी फाइदा गर्न Sberbank देखि ऋण प्रिपे गर्न? ऋण चुक्ता गर्न योजना, भुक्तानी को समय ध्यान गर्नुपर्छ। "समापन" यसको प्रयोग को अवधि को दोस्रो आधा क्रेडिट सानो लाभ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। भुक्तानी उहाँले हुनेछ कम चासो गर्न पहिले प्रमुख भाग को उधारकर्ता परिशोधन।
एकदम अक्सर एक क्रमिक र "छत" मासिक भुक्तानी एक चिल्लो पुन: गणनामा निम्त्याउँछ र creditor र ऋणी बीचको सम्बन्ध को पूरा गति अप जो राशि, त्यहाँ छ। धेरै आश्चर्य: रूपमा आंशिक बचत बैंक मा ऋण प्रिपे? प्रारम्भिक परिशोधन को यो विधि मा अल्गोरिदम नै रहन्छ, मात्र भुक्तानी मासिक शुल्क योगफल भन्दा ठूलो हुनुपर्दछ भनेर थप एक सानो नियम थपियो।
पैसा तोकिएको निर्धारित समय वा बैंक संग सम्झौता गरेर हस्तान्तरण गरिएको छ। को, सिफारिस अधिक रकम कम चासो भुक्तानी परिणामस्वरूप, ऋण कम छ। ऋण को एक आंशिक परिशोधन पूरा, यो (एक भिन्नता विधि संग) एक नयाँ भुक्तानी तालिका लागि एक बैंक कर्मचारी लागू गर्न आवश्यक छ।
कारण आवास को उच्च लागत गर्न, धेरै परिवारले मा अपार्टमेन्ट (घरहरू) को खरीद मा सहमत दीर्घकालीन ऋण। यो अवधि अन्तिम 15 वा बढी वर्ष को उधारकर्ता र ऋणदाता सम्बन्ध मा। वैश्विक परिवर्तन हुन सक्छ यस अवधिमा: कहिलेकाहीं परिवार वा आफन्त मदत भुक्तानी थप कमाउन सुरु हुन्छ। त्यहाँ एकदम तार्किक प्रश्न छ: निश्चित, एक विशेषज्ञ हुनेछ जवाफ "? यो प्रारम्भिक आफ्नो बंधक Sberbank ऋण तिर्न सम्भव छ" "हो।" र तपाईं कति र राम्ररी गणना गर्न सक्नुहुन्छ। मात्र सीमा - को overpayment मात्र बंधक मा 4th भुक्तानी पछि सम्भव छ, र कम से कम 15 हजार rubles ..
त्यसैले यसलाई संभव बचत बैंक मा ऋण प्रिपे छ? लेख बाट पाठकहरूलाई यो केवल सम्भव छैन तर पनि आवश्यक छ, यदि सम्भव छ भने छ कि सिक्न हुनेछ। बैंक जरिवाना वा सजाय को रूप मा कुनै पनि अतिरिक्त दायित्व आयातित र न्यूनतम अवस्था अनुपालनको आवश्यक छैन। उपभोक्ता, बंधक, ओटोमोबाइल: प्रक्रिया ऋण कुनै पनि प्रकारको लागि नै हो।
व्युत्पन्न जमानत - सबैका लागि एक मौका
CVV-कोड - कार्ड को प्रमुख fraudsters उपलब्ध छैन
नगद र बैंकहरू को क्रेडिट सञ्चालन। बैंकिङ सञ्चालन
SB बैंक: विश्वसनीयता दर्जा चुनौती
माछा-टाँसिएको - समुद्र छाया
चकलेट बिस्कुट र यसको भेरिएसनहरूमा लागि नुस्खा।
आफ्नै हातले फ्रेम घरहरू निर्माण
लेन्सलाई के हो? विस्तृत विश्लेषण
क्रेटे-म्यासेनियन सभ्यता। वास्तुकला र कला को विशिष्ट विशेषताहरु
सम्पादकहरूको को हुन्? सम्पादक: काम विवरण